Ụbọchị My Pet » Olee otú Kiss na 5 Easy Nzọụkwụ
emelitere ikpeazụ: Nov. 23 2020 | 2 min agụ
Isusu ọnụ bụ òmùme nke anya na mgbe mere n'ụzọ ziri ezi na ezi onye na-, ọ pụrụ iduga obi-pounding, agha-idobe anwansi. Ezie na nke a nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ, ọ bụghị. Site na-esonụ a mfe nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu, adịghị anya ị ga-abụ na ụzọ gị ịhụ ezimezi oku.
Nzọụkwụ 1: Bu wetere a Kiss
Oge bụ ihe niile. Site na idobe aghụghọ hints, ị nwere ike ina-susuru na-enweghị na-apụta, na-asị ya. Nkwurịta Okwu maka a nsusu ọnụ pụrụ ịgụnye: ijide nkenke na-achọ na gị ụbọchị ji egbugbere ọnụ, ubé gasịrị egbugbere ọnụ gị, ọnụ ọchị na mgbe ụfọdụ egbugbere ọnụ atarịta ibe ha arụ dị ka ị na-ele anya n'ime gị ụbọchị n'anya, ma ọ bụ na-eme ka ọnụ gị kissable na egbugbere ọnụ gloss / isi mkpisi na minty ọhụrụ ume. N'ezie, mgbe ị na-abụrịrị na onye gị na nke a mgbe, ọzọ ihe ịrịba ama na-enwe ga-enyere gị aka ịmata mgbe nri oge bụ susuo ha.
Nzọụkwụ 2: Isetịpụ na Udidi
Leaning maka a nsusu ọnụ bụ ọbụna sexier mgbe a otito e nyere. Sị “ị mara oke mma / mara mma” na-akpachi anya nwere ike inyere nkwupụta ụda elu ahuhu. Site ẹsụhọde olu na ụda olu gị dị ka ị na igbachi anya na-agwa gị ụbọchị na i nwere mmetụta miri emi maka ha mgbe na-adọrọ adọrọ ka ha gaa nso gị.
Nzọụkwụ 3: Ịkwụsị isusu ọnụ Mgbochi
Ma nke a bụ ihe mbụ ị nsusu, mbụ nsusu ọnụ na ọhụrụ na onye òtù ọlụlụ, ma ọ bụ na ị bụ ubé ụjọ banyere isusu ọnụ, na-agbasa ihe isusu ọnụ mgbochi ga bụghị nanị inye aka ruo ndị irighiri akwara ma ọ ga-egosi gị ihunanya bu. Kama ịga na maka nnukwu nsusu, ịdabere maka a mmakọ ma sutụ ha ọnụ gị ụbọchị si ntì. Ihe bụ isi a na-eme bụ ọnyịnye. Mee ka gị na otú obi na ebumnobi doro anya site na ịtụkwasị ndị nsusu nso ntị ma ọ bụ n'ọnụ mgbe egbu ole na ole Sekọnd. Agba izu ihe flirty n'ime ntị ha mgbe egbugbere ọnụ gị na-ekpetekwa bụ ụzọ ọzọ na-enyere agbaji kissing mgbochi.
Nzọụkwụ 4: -Aga maka Kiss
Na-nsusu ọnụ dị mfe. Ukwuu ahuhu ke akpa nsusu ọnụ pụrụ ịbụ a n'aka-apụ. Na egbugbere ọnụ gị nwayọ lawara, ma na-akụ a n'ụzọ kwụ ọtọ nsusu ma ọ bụ jiri nwayọọ igbachi egbugbere ọnụ gị na ụbọchị. Na nke a nzọụkwụ, ọ dịkwa mkpa na-eso gị ụbọchị na-edu. Lezienụ anya otú gị ụbọchị zara na-akpali n'oge nsusu. Ọ bụrụ na ha ịdabere na ma ọ bụ na-ekpetekwa, ị ga-enwe ike ịkwaga n'ebe a ọzọ omiiko nsusu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na-akwụsị ndị nsusu site Anam Udeme azụ, na-emeghere gị anya na-eme ka anya na kọntaktị, na ịmụmụ ọnụ ọchị.
Nzọụkwụ 5: Post-Kiss bliss
Nke a bụ honiimuunu ogbo nke kissing usoro. Ọ bụrụ na ị na-enwe aṅụrị nsusu ọnụ na-egosi gị na onye òtù ọlụlụ site n'aka nketa na ịmụmụ ọnụ ọchị. Ọ bụrụ na ị na-aga iso kissing, jide n'aka na ịnọgide na-enwe anụ ahụ gị na kọntaktị. I nwekwara ike ịgbanwee gị kissing ịke site n'akuku nke obibia, ọsọ na ogologo nke nsusu, susuo ịkwụsi ike na ume, na egbugbere ọnụ n'ọnọdu. Ọ bụrụ na ị na-eme na-esusu ọnụ n'ihi na a mgbe, -anwụkwa n'ime onye ọ bụla ọzọ n'anya na-enwe oge.
Ezie na nke a bụ Olileanya nke mbụ n'ime ọtụtụ nsutu maka gị na ụbọchị, ọ dị mkpa ka revel na mmetụta nke oge a. Ka ọchị sparkle na anya gị, na-achịkwa ọchị, na-enye na na “ị na na na n'elu ụwa” mmetụta.
Pụtara a Kiss